ဂုဏ်ယူမိပါသည် ! မိတ်ဆွေသည် တသက်တာပြောင်းလဲမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါပြီ! “ယခုဘာလုပ်သင့်သနည်း ? ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းရန် မည်သို့အစပြုရမည်နည်း? ဟုမိတ်ဆွေသည် မေးမြန်းနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်း စာမှ ကောက်နုတ်ထားသော အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ခြေလှမ်းငါးခုသည် မိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား သခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းရာတွင် မိတ်ဆွေသည် မေးရန်မေးခွန်းရှိပါလျှင www.GotQuestions.org/Myanmar ကိုကြည့်ပ
၁။	မိတ်ဆွေသည် ကယ်တင်ခြင်းတရားသိရှိရမည်။
၁ယော၊ ၅း၁၃ က “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကို ကိုယ်တိုင်ရသည် ဟုုသိစေခြင်းငှာ၊ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏” ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ရန် ဘုရား သခင်က အလိုတော်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချလုံခြုံမှုရှိသည်ကို သေချာရန် ဘုရားသခင်က အလိုတော် ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသော့ချက်တစ်ချို့တို့ကို အတိုချုံး၍လေ့လာကြပါစို့။
(က)	ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် ဒုစရိုက်ကိုပြုကြပြီ။ ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှတို့က ဘုရားသခင်ကို ဝမ်းနည်းစေသည် (ရောမ၊ ၃း၂၃)။
(ခ)	ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရခွဲခွာခြင်းဖြင့် အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ (ရောမ၊ ၆း၂၃)။
(ဂ)	ကျွနု်ပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန် သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည် (ရောမ၊ ၅း၈၊၂ကော၊ ၅း၂၁)။ သခင်ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့နေရာတွင် အစားထိုး၍ အသေခံခဲ့ကာ ကျွနု်ပ်တို့နှင့် ထိုက် တန်သော ပြစ်ဒဏ်ဟူသမျှကို သူယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုအသေခံခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရန်လုံလောက်သည်ဟု သူ၏ ထမြောက်ခြင်းက သက်သေထူပါသည်။
(ဃ)	သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူအားလုံးနှင့် သူ၏အသေခံခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ပေးဆပ်ကျေ အေးရန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကိုးစားသောသူအားလုံးတို့အား ဘုရားသခင်က အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းတရားပေးခဲ့ပါသည်” (ယောဟန်၊ ၃း၁၆၊ ရောမ၊ ၅း၁၊ ရောမ၊ ၈း၁)။
အထက်၌ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာဟူသမျှတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ မိတ်ဆွေအပြစ်အားလုံး သည် လွတ်ငြိမ်းခြင်းအခွင့်ရရှိပြီး ဘုရားသခင်က မိတ်ဆွေကို မစွန့်ပစ်မမေ့လျော့ဘူးဟု ကတိပြုထားပါသည်။ (ယောဟန်၊ ၁ဝး၂၈-၂၉)။ သခင်ယေရှုသာလျှင် မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မိတ်ဆွေယုံကြည်လက်ခံပါက ကောင်းကင်ရွှေအိမ်တော်၌ ဘုရား သခင်နှင့်အတူ ထာဝရကာလစိုးစံမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိနိုင်ပါသည်!
၂။	နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးသော အသင်းတော်ကိုရှာဖွေပါ။
အသင်းတော်သည် အဆောက်အဦးဖြစ်သည်ဟု မိတ်ဆွေမယူဆသင့်ပေ။ အသင်းတော်သည် လူတွေသာဖြစ်ပါ သည်။ ယုံကြည်သူတို့သည် ခရစ်တော်၌ အချင်းချင်းမိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချင်းချင်း မိတ် သဟာရဖွဲ့ခြင်းသည် အသင်းတော်၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုမိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည် ခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆွွေသည် နီးစပ်ရာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သော အသင်းတော်ကို ရှာဖွေ၍ သင်းအုပ်ဆရာနှင့် စကား ပြောရန် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်အားထက်သန်စွာ ခွန်အားပေးပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခံကြောင်း သင်းအုပ်ဆရာကို သိစေပါ။
အသင်းတော်၏ ဒုတိယမြောက်ရည်ရွယ်ချက်သည် နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေအတွက် ဘုရားသခင်၏လမ်းညွှန်ချက်တို့ကို မိတ်ဆွေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားလည်သိကျွမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာ ရယူပိုင်ဆိုင်ရန်နှင့် တန်ခိုးကြီးမားသော ခရစ်ယာန်အသက်တာရယူပိုင်ဆိုင်ရန်ဖြစ် စေသော သော့ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၂တိမောသေ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတွင် “ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုကိုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှာ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ သြဝါဒပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း အမှုများပြုတတ်၏ ”ဟုဖော်ပြထားသည်။
အသင်းတော်၏ တတိယမြောက်ရည်ရွယ်ချက်သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ် သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ လိုအပ်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ကို ဦးဆောင်လမ်းပြသွန်သင် သည်။ သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးမတင်ပဲ အဘယ်သို့နေနိုင်မည်နည်း ? ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသည်။ ဖြောင့်မတ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးဂရုဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဗျာဒိတ်၊ ၄း၁၁ ထဲတွင် “အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုအရာတို့သည် အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်လျှက်ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းအသားရေးတန်ခိုးတော်ကို ခံစားထိုက်တော်မူ၏ ဟု လျှောက်ဆို၍ ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ မိမိ တို့သရဖူများကို ချထားကြ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၃။	ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာရဖွဲ့နိီုင်ရန် နေ့တိုင်းသီးသန့်အချိန်ယူရမည်။
ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့နိုင်ရန် နေ့တိုင်းသီးသန့်အချိန်ယူခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အချို့က ၄င်းကို “တိတ်ဆိတ်သောအချိန်”ဟုခေါ်ကြသည်။ အချို့သောသူတို့က ၄င်းကို “ဝတ်ပြုခြင်း”ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုအချိန်သည် ဘုရားသခင်ထံဝတ်ပြုခြင်းဖြင့် အသက်တာဆက်ကပ်အပ်နှံသောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အချို့သည် နံနက်ပိုင်းတွင် အချိန်ယူတတ်ကြပြီး အချို့က ညပိုင်းတွင် အချိန်ယူတတ်ကြသည်။ မိတ်ဆွေသည် နံနက်ပိုင်း တွင်အချိန်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ ညနေပိုင်းတွင် အချိန်ယူသည်ဖြစ်စေ ပြဿနာမရှိပေ။ ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်မှန်မှန်ယူဖို့ရန်က အရေးကြီးသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်ယူသောအခါ မည်သည့်အရာတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း ?
(က)	ဆုတောင်းခြင်း ။	။	ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြဿနာတို့ကို ဘုရားသခင်ထံပြောပြပါ။ ပညာနှင့်မစခြင်းရရှိရန် ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ပါ။ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ကို မည်မျှချစ်သည်ကို၄င်း၊ မိတ်ဆွေ အတွက် သူပြုခဲ့သော အမှုအားလုံးကို မည်မျှချီးမွမ်းသည်ကို၄င်း၊ ဘုရားသခင်ကိုပြောပြပါ။ ဤသို့ပြုခြင်း သည် ဆုတောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(ခ)	ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း ။	။	အသင်းတော်၌ဖြစ်စေ၊ ဥပုဒ်စာဖြေသင်တန်း၌ဖြစ်စေ၊ သမ္မာကျမ်းစာ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ယူခြင်းများအပြင် မိတ်ဆွေသည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အောင်မြင်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် အတွက် သိသင့်သိထိုက်သောအရာတို့ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သိရှိရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတို့ကို အစေခံနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ၀ိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သိသင့်သိထိုက်သော အရာဟူသမျှကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ဝမ်းမြောက်စေ၍ ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် စိတ်နှစ်သိမ့်အားရ ခြင်းရှိနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ အခြေခံညွှန်ကြားချက်ပင်ဖြစ်သည်။
၄။	မိတ်ဆွေ၏ ၀ိညာ ဉ်ရေးရာ တိုးတက်ရန် အခြားသူများနှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့ပါ။
၁ကော၊ ၁၅း၃၃ ထဲတွင် “ အလွဲမယူကြနှင့်။ မကောင်းသောသူတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းသော အကျင့်ဓလေ့ယိုယွင်းတတ်၏။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ “ဆိုး”သောသူတို့၏ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းမှ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာက အစဉ်အမြဲကတိပေးထားပါသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်ပြုသောသူတို့နှင့် အမြဲလက်တွက်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် လည်း ထိုသူတို့နည်းတူ အပြစ်ဒုစရိုက်၌ကျင်လည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသူတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တက ကျွနု်ပ်တို့ကို “လွှမ်းမိုး”နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူနှင့် သူ့ထံသို့ဆက်ကပ်အပ်နှံသောသူတို့ကို ရှာဖွေ ပေါင်းဖော်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေကို ကူညီနိုင်သူ၊ ခွန်အားပေးနိုင်သူ တစ်ယောက်(သို့) နှစ်ယောက်ကို မိတ်ဆွေ၏ အသင်းတော်၌ရှာဖွေပါ (ဟေဗြဲ၊ ၃း၁၃၊ ၁ဝး၂၄)။ ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ယူရာတွင်ဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေ၏သွားလာလှုပ်ရှားမှု၌ဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေ ဘုရား သခင်နှင့်အတူ သွားလာရာတွင်ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကိုကူညီဖေးမရန် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကို အကူအညီတောင်းခံပါ။ မိတ်ဆွေသည် သူငယ်ချင်းတို့ကို ကူညီပေးနိုင်သော နည်းလမ်းရှိလျှင် ကူညီပေးနိုင်ရန် သူတို့ကို ခွင့်တောင်းပါ။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်မခံသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတို့ကို စွန့်ပစ်ရန်ဖော်ပြလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့ကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ် ပေါင်းသင်း၍ချစ်ပါ။ မိတ်ဆွေသည် မိမိအသက်တာကို သခင်ယေရှုက ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်းနှင့် မိတ်ဆွေစွဲလန်းခဲ့ဘူးသော လောကီအရာများ လုံးဝမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ကြောင်းကို မိတ်ဆွေ၏သူငယ်ချင်းတို့အား သိစေပါ။ မိတ်ဆွေ၏ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်တို့နှင့် သခင်ယေရှုအကြောင်း ဆွေးနွေးဝေငှနိုင်သော အချိန်ရရှိရန် ဘုရား သခင်ထံဆုတောင်းပါ။
၅။	ဗတ္တိဇံ ခံယူပါ။
လူများစွာတို့က ဗတ္တိဇံအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လွှဲမှားစွာခံယူတတ်ကြပါသည်။ “ဗတ္တိဇ”၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ရေထဲသို့ နှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းသည် မိတ်ဆွေက ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံကြောင်း လူအများရှေ့ တွင် သက်သေခံခြင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏ နောက်တော်သို့လိုက်လျှောက်ရန် မိတ်ဆွေ၏ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းလည်းဖြစ်ပါ သည်။ ရေထဲသို့ နှစ်မြှုပ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သဂြိုလ်ခြင်း ခံယူခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ရေထဲမှ ပြန်လည်ထမြောက် ခြင်းသည်လည်း ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ပုံဆောင်ထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းသည် သခင်ယေရှုက မိတ်ဆွေအတွက် အသေခံခြင်း၊ သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည် (ရောမ၊ ၆း၃-၄)။
ဗတ္တဇံခံယူခြင်းသည် မိတ်ဆွေကို ကယ်တင်ပေးသောအရာမဟုတ်ပေ။ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းက မိတ်ဆွေ၏ အပြစ်တို့ကို မဆေးကြောနိုင်ပေ။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် နာခံခြင်းအတွက် ရှေ့သို့ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှုကို ရရှိ နိုင်ရန် ခရစ်တော်ကိုသာ ယုံကြည်ကြောင်းကို လူအများရှေ့တွင် ကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းသည် နာခံခြင်း ခြေလှမ်းဖြစ်သော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြောင်းကို ပရိတ်သတ်အများရှေ့၌ ကြွေးကြော်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏နောက်သို့ လိုက်လျှောက်ရန် အသက်တာဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဗတ္တိဇံ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူလိုလျှင် မိတ်ဆွေသည် သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် စကားပြောသင့်ပါသည်။